Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta dood xasaasiya ku leh Muqdisho | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta dood xasaasiya ku leh Muqdisho
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta dood xasaasiya ku leh Muqdisho
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya ayaa maanta lagu wadaa inay dood adag ka yeeshaan Xeerka Metelaadda Gobolka Banaadir ee Golaha Aqalka Sare.
Xeerkan oo mar sii horeysay lagu soo daray Sharciga Doorashooyinka Qaranka ee murunka badani hareeyay ayaa waxaa soo diyaariyay, oo Guddoonka Golaha Shacabka u soo gudbiyay Guddiga Wadajirka ee Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya, ee Dhameystirka Xeerarka Sharciga Doorashooyinka Qaranka.
In Guddiga Wadajir ee Labada Aqal soo diyaariyan Xeerka Metelaadda Gobolka Banaadir waxaa la rumeysan yahay in uu kaalin mug lihi ku leeyahay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Madaxweynaha ayaa 6dii bishan mar uu furayay Kalfadhiga 7aad ee Labada Aqalka waxaa uu si wadajira uu Mudane-yaasha uga codsaday in laga aqbalo dowladiisa in Gobolka Banaadir uu yeesho xubno ku metela Golaha Aqalka Sare.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in tani ay noqon doonto mid ka mid ah doodihii ugu qaraaraa, ee ay yeeshaan Xildhibaanada Golaha Shacabka, bacdamaa ay jiraan kuwo fara-badan oo si weyn uga soo horjeeda.
Xildhibaanada qaarkood waxayba u ololeynayan in Gobolka Banaadir uu yeesho maqaam u gaar ah, ka hor inta aan loo raadin Metelaadda Golaha Aqalka Sare.
Ajandaha labaad ee ay maanta Xildhibaanada Golaha Shacabka ka doodi doonaan ayaa ah Xeerka Kuraasta Gobolada Waqooyi (Somaliland), taasoo aynaan weli kala cadayn halka ay tahay in lagu soo doorto, balse Gudidga Wadajirka waxaa ay ku talinayan in lagu qabto Caasimadda Muqdisho, si lamid ah sanadkii 2016.
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta dood xasaasiya ku leh Muqdisho was last modified: June 22nd, 2020 by Admin